3.7V Li-Ion ဆဲလ်
3.7V Li-Ion ဗူး
7.4V Li-Ion ဗူး
11.1V Li-Ion ဗူး
14.8V လီ -Ion ဗူး
18.5V Li-Ion ဗူး
24V Li-Ion ဗူး
36V Li-Ion ဗူး
48V Li-Ion ဗူး
60V Li-Ion ဗူး
72V Li-Ion ဗူး
3.2V LiFePO4 ဆဲလ်
3.2V LiFePO4 pack ကို
6.4V LiFePO4 pack ကို
9.6V LiFePO4 ဗူး
12V LiFePO4 ဗူး
24V LiFePO4 ဗူး
36V LiFePO4 ဗူး
48V LiFePO4 ဗူး
60V LiFePO4 pack ကို
72V LiFePO4 pack ကို
လျှောက်လွှာ & ဖြေရှင်းချက်
အရည်အသွေးမြင့် Li-ion အားသွင်း ...
18650 3.6V 3500mAh လီသီယမ် ...
3.6V 6250mAh LG Lithium အိုင်းယွန်း ...
POS စက်အတွက် 18650 3.6V 2600mAh Samsung Lithium Battery Pack
အမည်ခံဗို့အား: 3.6V; အမည်ခံစွမ်းရည်: 2600mAh; ဘက်ထရီဆဲလ်: ICR18650-26J / 2600mAh /3.63V-SDI; အရွယ်အစား: 66.5 * 23 * 18.9mm （မက်စ်）; လျှောက်လွှာ: POS စက်နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ကိရိယာများ
3.7v 2600mah Lithium li-ion အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် ICR 18650 Li ion Battery Cell
3.7v 2600mah Lithium Li-ion အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် ICR 18650 လီအွန်ဘက်ထရီဆဲလ်နှင့်အတူတရုတ်စက်ရုံစျေးနှုန်းစံသတ်မှတ်ချက်အမှတ် .: SSL-ICR3S12P18650E25 နိဒါန်း: ၃.၇ ဗ ၂၆၀၀mAh လီ-ion လီသီယမ်ဘက်ထရီအထုပ်သည်နေရောင်ခြည်သုံးလမ်း၊ နေရောင်ခြည်သုံးဆက်သွယ်ရေးစက်၊ , ကစားစရာများ, gps Tracker, LED မီးများ, Lawn Lamp, M
ဂေါက်သီးလှည်းအတွက် 48V 20Ah Li-Ion လီသီယမ်သည်ဘက်ထရီပါဝါလျှပ်စစ်စက်ဘီးဆိုင်
SOSLLI ၏ lithim ion battery ၏ပုံမှန်အားသာချက် PACK: Safer - ဆဲလ်အတွင်းရှိတိုတောင်းသော circuit ကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းသုံးမျိုးကာကွယ်မှု။ အစစ်အမှန်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည်နိမ့် Self-discharging, အဘယ်သူမျှမမှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အကြီးစားအသုတ်ထုတ်လုပ်မှု, အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်အလွန်ဆင်တူဆဲလ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။
36V 4.4Ah 10S2P CE FCC IEC62133 လျှပ်စစ် Hoverboard Self Balance စမတ် Scooter ဘက်ထရီ 36V 4.4Ah
Lithium-ion Battery Pack 36V 4.4Ah 10S2P CE FCC IEC62133 လျှပ်စစ် Hoverboard Self Balance စမတ် Scooter ဘက်ထရီ 36V 4.4Ah မော်ဒယ်အမှတ်: SSL-ICR10S2P
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းအတွက် 11.1V 30Ah li-ion 18650 lithium ion li-ion ဘက်ထရီ
Model No .: SSL-ICR3S12P18650E25 နိဒါန်း: နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီးများအတွက် 11.1V 30Ah li-ion လီသီယမ်လီယွန်ဘက်ထရီအထုပ်, တယ်လီကွန်း rectifier, အိမ်အသုံးအဆောင်, Power Tools, ကစားစရာ, gps Tracker, LED မီး, မီးခွက်၊ Miner မီးအိမ်၊ LED မီးများ၊ Lawn Lamp, Miner lamp, CCTV နှင့်လုံခြုံရေးကင်မရာ၊
3.7V 500mAh SSLLP752540 လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီ
ခေါင်းစဉ်: 3.7V 500mAh SSLLP752540 လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီမော်ဒယ်အမှတ်။ : SSL-LP752540 နိဒါန်း: လျှပ်စစ် comsummer ထုတ်ကုန်များအတွက် 3.7V 500mAh SSL-LP752540 လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီ။ လျှပ်စစ်သုံးလေ့ကျင့်ခန်း၊ လျှပ်စစ်မီးစက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ အဝေးထိန်းကားများ၊ လှေ၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ကစားစရာများ၊
18v 5S2P 4400mAh 18650 li-ion ဘက်ထရီအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီမော်ဒယ်အမှတ်။ : SSL-ICR5S2P 18.5V 4.4Ah 18650 စက်မှုကွန်ပြူတာအတွက်လီသီယမ်ဘက်ထရီကိုဘက်ထရီတင်သွင်းသည်။ လျှောက်လွှာ: စက်မှုကွန်ပျူတာ, စမ်းသပ်ကိရိယာများ။
ev bike အတွက် 36V 13AH ပြွန်လီသီယမ်အိုင်းယွန်း Ebike ဘက်ထရီကိုချပါ
ev bike အတွက် 36V 13AH အောက်ပြွန် lithium ion Ebike ဘက်ထရီမော်ဒယ်နံပါတ် .: SSL-ICR10S4P နိဒါန်း ၃၆ ဗ ၁၃ အီလီလီနီယမ်လီယိုလီယမ်သည်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား၊ လျှပ်စစ်ကား၊ E.Tour Car၊ လျှပ်စစ်သုံးဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီအတွက်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား၊ e.wheelchairelectric လေ့ကျင့်ခန်း, လျှပ်စစ်လွှ, မြက်ရိတ်စက်, အဝေးထိန်း
SOSLLI သည်အဆင့်မြင့်ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းခြင်းစနစ်များ၊ အိုမင်းနေသောကက်ဘိနက်၊ BMS စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ၁၀၀v ကြီးမားသောလီယွန်ဘက်ထရီစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အလိုအလျောက်ဂဟေဆက်စက်၊
လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီဆဲလ်များ, ပါဝါ Lithium ဘက်ထရီ, 3.6v လီသီယမ် -Ion ဘက်ထရီ, ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီ, 20ah လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ, ပါဝါဘက်ထရီ Pack ကို,
3 / F ကို, Bldg ။ A, Tongfeng စက်မှုဇုန်၊ အမှတ် ၂၉ Longwan စျေးလမ်း၊ Kengzi လမ်း၊ Pingshan နယူးခရိုင်၊ Shenzhen, China, 518122